Madaxweyne Farmaajo oo sheegay in la kordhinaayo duqeymaha lal... | Universal Somali TV
Madaxweyne Farmaajo oo sheegay in la kordhinaayo duqeymaha lala beegsado Al Shabaab
Madaxweynaha Somaliya Maxamed C/laahi Farmaajo, ayaa sheegay in la kordhinaayo duqeymaha ka dhanka ah Ururka Al Shabaab ee lagu beegsanaayo Saldhigyada Shabaabka ay joogaan.
Farmaajo oo Wareysi gaar ah siiyay laanta Afka Somaliga BBC, ayaa wuxuu sheegay, iyadoo laga duulaayo dagaalka ka dhanka ah Ururka Al Shabaab ee dowladda Somaliya ku jirto in la kordhinaayo duqeymaha.
Wuxuu sheegay Madaxweynaha duqeynta lala beegsanaayo Shabaab in laga taxadaraayo waxyeelo ka soo gaarto dadka shacabka ah, waxayna arintaasi ka wada hadleen masuuliyiin ka tirsan dowladda Mareykanka, maadaama Mareykanka ay fuliyaan duqeymaha diyaaradaha.
“Duqeymaha waa dhab waa ay bateen waana ay sii badan doonaan, maxaa yeelay Shabaab iyo argagixiso in aan ka ciribtirno Somaliya muddo kooban, kaliya ma kula dagaali karno ciidanka dhulka ah, mana hayno ciidan cir, Mareykanka waxa ay ii xaqiijiyeen in bartilmaameedkooda uu yahay meelaha ay joogaan Shabaab, si dadka shacabka ah waxyeelada looga ilaaliyo.” Ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Kan-xigaShabaab oo askar ku kala dilay Magaal...
Kan-horeShir ku saabsan wadamada ku bahoobay ...
41,659,265 unique visits